Kedu teknụzụ na-egbu mmadụ | Martech Zone
Nke a bụ kediegwu video si Socialnomics na Eric Qualman, edemede nke Onye Ndú Dijitalụ: Igodo 5 dị mfe maka ihe ịga nke ọma na mmetụta. Anaghị m ewepụ okwu a okowot. Agbanyeghị na ọtụtụ ọrụ na-efu n'oge oge ọhụụ, enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọnụọgụ na-abawanye na ọrụ na ohere. N'ụzọ dị mwute, anyị nwere ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na-anagide mgbanwe ndị ahụ kama imeghari. N'echiche m dị umeala n'obi, nke ahụ na-ebelata mmepe ọhụụ nke ihe ọhụrụ.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ vidiyo na-atọ ọchị na ụda olu dị egwu!
Tags: mmekọrịta ọhateknụzụ ga-egbuvideo gburu redio oké ifufe